Famonoana mpitandro filaminana :: Nogadraina ilay nanindrona antsy zandary • AoRaha
Natolotra ny Fampanoavana, herinandro taty aoriana, ny lehilahy iray voatondro ho namono zandary tamin’ny tsindron’antsy tany Mangatamboahangy Ambatofinandrahana, tamin’ny alatsinainy 13 mey. Naiditra am-ponja vonjimaika izy.
Vao mpiana-draharaha ilay zandary namoy ny ainy, tany Ambatofinandrahana. Nahita lehilahy roa nifampitolona izy, tamin’ny harivan’io alatsinainy 13 mey io ka nanasaraka azy ireo. Tamin’izany no nisian’ny fandratrana namoizany ny ainy.
«Nanaiky niala moramora ny iray tamin’izy roa lahy nifampitolona. Nisy antsy kosa tany amin’ilay faharoa. Tsy nihambahamba itsy farany nanindrona antsy ny kibon’ilay zandary. Nandositra izy ary tratra, tamin’io hariva io ihany», araka ny fitantaran’ny zandarimaria any Ambato-finandrahana.
Fahatrarana Afrikana :: Mpiambina nangalatra menaka Mitentina roanjato tapitrisa ariary